Top News: Heshiisyadii lagu galay Gaalkacyo oo maanta lagu wado in la dhaqangeliyo Iyo Madaxweynayaasha Labada Maamul oo arinkaasi Hormuud u ah. – Kismaayo24 News Agency
Top News: Heshiisyadii lagu galay Gaalkacyo oo maanta lagu wado in la dhaqangeliyo Iyo Madaxweynayaasha Labada Maamul oo arinkaasi Hormuud u ah.
by admin 5th December 2015 029
Madaxweynayaasha Maamulada Puntland iyo Galmudug oo shalay kulankii 3aad ku yeeshay garoonka diyaaradaha ayaa balan qaaday inay dhaqan gelin doonaan heshiiska, isla markaana ka dhabeyn doonaan balan-qaadkoodii ahaa in colaada la joojiyo.
Kulankan oo ay goob joog ka ahaayeen Ra’iisul Wasaaraha, Madaxweynaha Jubbaland, Odayaal, waxgarad iyo culumaa’udiin ayaa la isku waafaqay in la sii wado dadaalada, isla markaana laga shaqeeyo nabad, waxaana labada dhinac ay la kala hadleen taliyeyaasha ciidamada, isla markaana fareen in xabad joojinta la dhaqan geliyo.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Odawaa ayaa sheegay in wixii hada ka dambeeya dowladda Federaalka ay kula xisaabtameyso Madaxda Puntland iyo Galmudug Mas’uuliyadda nabad ku wada noolaanshaha dadka Gaalkacyo.
Wasiir Odawaa ayaa sheegay in Mas’uuliyiinta dowladda aanay marnaba ka tagi doonaan Gaalkacyo, illaa la xaqiijiyo nabadda, labada dhinacna ay adkeeyaan xasiloonida magaalada, dadkana ay dib u soo laabtaan.
Dhinaca kale waxaa maanta lagu wadaa in Madaxda Puntland iyo Galmudug oo ay wehliyeen Ra’iisul Wasaaraha, Madaxweynaha Jubbaland iyo guddiyada waan waanta ayaa waxay socdaal nabadeed ku marayaan waqooyiga iyo koofurta magaalada iyo goobihii lagu dagaalamay, si kalsooni nabadgelyo loogu muujiyo shacabkii ka qaxay magaalada
Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas ayaa tagi doona dhinaca koofureed ee magaalada Gaalkacyo, halkaasoo uu kula kulmi doono Madaxweynaha Galmudug, sidoo kale labada dhinac ayaa kulan kale isla maanta ku yeelan doona dhinaca waqooyi ee magaalada, kaasoo xoojin u ah heshiiska nabadeed.
Si kastaba ha ahaatee colaadii ka dhacday magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ku barakacay illaa afartan kun oo qoys, halka dad fara badan ku dhinteen, kuwa kalena ku dhaawacmeen, kuwaasoo rayid iyo dhinacyadii dagaalamayay ka mid ahaa.
Xog: Qorshe la doonayo in Ciidamo AMISOM ah lagu geeyo Magaalada Gaalkacyo oo socda Iyo k24 oo heshay cida qorshahaasi dabada ka riixeysa.
Deg deg:- Guddoomiyaha Bangiga Soomaaliya iyo ku Xigeenkiisa oo la magacaabay
Madax ka tirsan Maamulka HirShabelle oo ka badbaaday.